Turkiga Oo Cadaadis Ku Saaraya Sacuudiga in La Baaro Qunsuliyaddiisa ee Istanbul -
HomeWararkaTurkiga Oo Cadaadis Ku Saaraya Sacuudiga in La Baaro Qunsuliyaddiisa ee Istanbul
Turkiga Oo Cadaadis Ku Saaraya Sacuudiga in La Baaro Qunsuliyaddiisa ee Istanbul
Jamal Khashoggi ayaa la waayey kadib markii uu todobaadkii hore galay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in Mr Khashoggi lagu dhex dilay Qunsuliyadda, maydkiisiina halkaas laga saaray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Sucuudigu uu caddeeyey in saxafigaasi uu qunsuliyadda ka baxay asagoo nabad qaba.
Xaqiiqada ah in markii ugu dambeysay ee la arkay Jamal Khashoggi ay ahayd ku dhawaad isbuuc ka hor isagoo gudaha usii galaya qunsuliyada ku taala magaalada Istanbul sidoo kalena qofna u indhaha saarin isago dhismaha ka baxaya ayaa ah arrinta ugu weyn ee walaac dhalinaysa oo ah in waxyeelo loogu geystay dhismaha dhexdiisa.
Saraakisha ammaanka gudaha uma geli karaan qunsuliyada boqortooyadda Sacuudiga iyagoo aan fasax heysanin sababtoo ah waxaa lagu tiriyaa inay kamid tahay dalka Sacuudiga oo ay ka madax banaantahay dalka ay ku taalo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaa u sare sii qaaday cadaadiska u saarayo dalka Sacuudiga si sharaxad ay uga bixiyaan waxaa lasoo gudboonaaday weriyahan caanka ah, shir jaraid oo u ka hadlayna waxaa u yiri.
“Mr Khashoggi waxaa u mar aad ugu dhawaa qoyska boqortoyadda Sacuudiga balse xilliyadii ugu dambeeyay waxaa u magangelyo u raadsaday dalka Maraykanka halkaas oo u aad dhaleceeyn dusha uga tuuri jiray xukumadda dalkiisa”.
Jamaal Khashoggi, oo sidoo kalena wax ku qora wargayska Washington Post, qunsuliyadda u tegey si uu “warqado u buuxbuuxiyo” ayuu wargaysku yiri, wixii markaas ka dambeeyeyna warkiisa lama maqlin.
Saddex maalmood ka hor inta uusan booqanin qunsuliyada boqortooyada Sacuudiga ee Istanbul, weriye Jamal Khashoggi waxaa u tegay xaruunta dhexe ee BBC-da.
Ka hor inta uusan bixinin wareysiga uga qorsheysana BBC-da ee looga hadlayay hanaanka nabadda ee bariga daxe, waxaa u caddeeyay in uusan u maleynin in dib u ugu noqon doono dalkiisa hooyo ee Sacuudi Carabiya.
Dhinaca kale Xukkumada Britain ayaa aad ugu walacsan halka u ku dambeyay Jamal Khashoggi.
Maraykanka ayaa sidoo kale walaacan la qaba dowladda Britain iyadoo labada dowladoodna ay arrinta weli mowqif cad ka qaadanin.
Haddii cadeymo dheerad la helo oo ah in Jamal Khashoggi la dilay, su’aasha meesha ku jirta ayaa ah Maraykanka iyo Britain ma cambareyn doonan falkan sidoo kalena talaabo culus ma ka qaadi karan boqortooyadda Sacuudiga oo ah saxiibkooda dhaw.